Orinasa antitra - Mpanamboatra Zokiolona any Sina, mpamatsy
GPS Tracker / Zokiolona / GT-E07
Ity modely GPS tracker ity dia natao manokana ho an'ny be antitra miaraka amin'ny fiasan'ny fifandraisana sy ny fanaraha-maso ny fahasalamana. Mikarakara feno ny be antitra izy ireo. Ny fiasan'ny toerana dia mifototra amin'ny teknolojia maro, GPS + AGPS + LBS + WIFI izay afaka mahita ny toerana misy ny 5m marina, aza matahotra ianao fa ho very ny zokiolona, ​​afaka mamantatra amin'ny fotoana rehetra ianao eto ambonin'ny tany. Ary mametraka fefy elektrika ianao, raha vantany vao mivoaka ny faritra ilay mpampita fitaovana dia hampandrenesin'ny APP anao.
Manara-maso ny mari-pana amin'ny vatana, ny tosidra, ny oxygen oxygen ary ny tahan'ny fo, ho hitanao fa misy tsy fanao amin'ny voalohany ary mandray andraikitra. Izy io dia misy fampandrenesana fianjerana antitra, ary SOS lakile tokana ho fanampiana, hifandray ianao rehefa sahirana izy ireo.
Ho an'ny fifandraisana dia manome antso an-tsary HD, antso am-peo ary fifandraisana am-peo, fa voafetra amin'ny laharana lisitra voarakitra izay misoroka loza mety hitranga amin'ny olon-tsy fantatra.
Tsy tantera-drano amin'ny haavon'ny IP67 izy io, tsy misy atahorana ny rano velona sy ny orana iraisana. Raha apetrakao anaty rano tsy lavitra ny 1m sy latsaky ny 30mn ny tracker dia tsy nisy vokany ilay tracker.
Mamboly hazavana, Jiro zavamaniry, Mitombo ny avotra, Mamboly Lightin ny zavamaniry, Mitombo Lightin, Mitombo Ligh,